Showing 21-40 of 317 items.
सिरहा,फाल्गुन ४ गते ।&nbsp; इराकको राजधानी बग्दादमा अमेरिकी राजदूतावास नजिक आइतबार क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको छ । स्थानीय संचार माध्यमले उक्त क्षेप्यास्त्रबाट कुनै क्षति भए नभएको जानकारी प्राप्त भइनसकेको बताएका छन् । उच्च सुरक�
कोरोना भाइरसविरुद्ध एकजुट हुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वान
सिरहा,फाल्गुन ४ गते । म्युनिख विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले विश्वभरी फैलिएको र हजारौको मृत्यु भएको कोरोना भाइरस विरुद्ध एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गरेको छ। संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुसले शनिबार आयोजित ५�
सपथपछि केजरीवालले भने, ‘चुनावमा जसलाई भोट गरे पनि म सबैकाे मुख्यमन्त्री हुँ’
सिरहा,फाल्गुन ४ गते ।&nbsp; तेस्रो पटक नयाँ दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका अरविन्द केजरीवालले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। कंग्रेस नेता शीला दीक्षितपछि तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रकिो सथ लिने उनी दोस्रो व्यक्ति हुन्। उनीसँगै मनीष स�
दश रुपैयामा खाना खुवाउने दिलिप लाई संस्कृति मंचले गर्यो सम्मान
राजेश शर्माबिराटनगर,फागुन २ गते । मोरङको बिराटनगरमा दस रुपैयामा पछिल्लो ५० दिन देखि निरन्तर पेट भरी खाना खुवाउदै आएका समाजसेवी दिलीप धरेवालाई भारत नेपाल सामाजिक संस्कृति मंचद्वारा सम्मान गरिएको छ । सम्मानित गर्दै मंचका अध्य�
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ हजार ३०० नाघ्यो, हुबेइमा एकै दिनमा २४२ को मृत्यु
सिरहा,फाल्गुन १ गते । कोरोना भाइरसबाट बढी सङ्क्रमित भएको भनिएको चीनको हुबेइ प्रान्तको उहानमा मात्र एकै दिनमा २४२ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। एकै दिनमा २४२ जनाको मृत्यु भएको बिहीबार प्राप्त एक समाचारमा जनाइएको हो। हुबेइ प्रा�
दिल्लीबाट बिहार आउदै गरेको बस र ट्रक ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु
सिरहा,फाल्गुन १ गते । भारतको उत्तर प्रदेशको शहर फिरोजाबाद नजिक आगरा&ndash;लखनउ एक्सप्रेस वेमा बस र ट्रक ठोक्किँदा कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा अन्य ३० जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन् । बस दिल्लीबाट बिहारको मोतिहारीतर्फ
निर्माणस्थलमा पुरिएर कुवेतमा ४ नेपालीको मृत्यु
सिरहा,फाल्गुन १ गते ।कुवेतको एक निर्माणस्थलमा&nbsp; पुरिएर ४ नेपालीको ज्यान गएको छ । ३ जना घाइते छन् । कुवेतको अल&ndash;मुत्ला क्षेत्रको निर्माणस्थलमा बुधबार खसेको बालुवा र ग्राभेलको ढिस्कोमा पुरिएर&nbsp; ४ नेपालीको ज्यान गएको अरब टाइम�
सानदार जितपछि फेरी दिल्लीको मुख्यमंत्री बन्दै अरविन्द केजरीवाल, भाजपा र कांग्रेसको बेहाल !
सिरहा माघ २९ गते । भारतको राजधानी दिल्लीको विधानसभाको चुनावमा आफ्नो पार्टीले सानदार जित हासिल गरेपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नो अर्को कार्यकाल सुरक्षित बनाएका छन् । यो चुनावमा आम आदमी पार्टी (आप)लाई मतदा
कोरोना भाइरसको विषयमा सबैभन्दा पहिले जानकारी दिने डाक्टरको मृत्यु
सिरहा,माघ २४ गते । कोरोना भाइरस विषयमा सबैभन्दा पहिले जानकारी दिने चिनियाँ डाक्टर लि वेन्लियाङको कोरोनाको मत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसकै संक्रमणटबाट डा। वेन्लियाङको मृत्यु भएको हो ।चीनको उहान सेन्ट्रल हस्पिटलमा कार्यरत डा। ल�
प्रकाशित मितिः माघ 24, 2076
लक्षण देखा नपरिकनै पनि वुहान भाइरसको संक्रमण सर्ने कुरा प्रमाणित
सिरहा,माघ १८ गते । वुहानबाट देखापरेको कोरोनाभाइरसको सक्रमण तीब्र रुपमा फैलिँदै गएपछि गत हप्ता चिनियाँ अधिकारीहरुले वुहान कोरोनोभाइरस लक्षण देखापरिकनै मानिसबाट मानिसमा सर्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यो कुरालाई संसारभरिनै शंक�
कोरोना भाइरसले स‌ंसारभरि हलचल स् मर्नेको संख्या २१३ पुग्यो, संक्रमितहरुको संख्या ९ हजार ८०९
सिरहा,माघ १८ गते । चीनमा कोरोनोभाइरस संक्रमणका कारण मर्नेहरुको संख्याका २१३ पुगेको छ भने संक्रमितहरुको संख्या ९,८०९ जना पुगेको छ । यतिखेर १०२,००० जना मानिसहरुलाई सम्भावित संक्रमणको आशंकामा चिकित्सीय निगरानीमा राखिएका छन् । �
सिरहाको नेपाल -भारत सिमानामा मानवसाङलो प्रदर्शन
सिरहाको सिमाक्षेत्रमा नेपाल&ndash;भारतका स्थानीय र सरकारी पदाधिकारीहरुको संयुक्त मानव साङलो प्रर्दशन गरेका छन् । लागुऔष, मदिरा सेवन विरुद्ध तथा बालविवाह र दाईजो प्रथा विरुद्ध मानवसाङलो प्रदर्शन गरिएको हो । त्यसैगरी पर्यावरणको
सिरहा,पुस २३ गते । मोदी सरकारले श्रमविरोधी नीति ल्याएको भन्दै भारतीय ट्रेड युनियनहरुले बुधबार &lsquo;भारत बन्द&rsquo; को घोषणा गरेका छन् । बन्दले विभिन्न राज्यहरुमा जनजीवन प्रभावित भएको छ । विभिन्न १० वटा केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरुले
सोमालियामा कार बम विस्फोट स् ७६ को मृत्यु, ९० जना बढी घाइते विद्यार्थी पनि बम विस्फोटको शिकार
सिरहा, पुस १३ गते । सोमालियामा कार बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गएको छ । ९० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । बिहानको व्यस्त समयमा राजधानी मोगादिशुको चेकपोस्ट नजिकै बम विस्फोट भएको हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएअनुसार, सडक �
प्रकाशित मितिः पुष 13, 2076
नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक पोखरामा
पोखरा, मंसिर ४ गते। नेपाल भारतको सीमा सुरक्षा बैठक पोखराको दोबिल्लामा रहेको माउन्ट ग्लोरी रिसोर्टमा शुरु भएको छ। आजबाट सुरू भएको बैठक तीन दिनसम्म चलनेछ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भ�
प्रकाशित मितिः मंसिर 4, 2076
सिड्नी, मंसिर ४ गते। अस्ट्रेलियामा हालै फैलिएको भीषण डढेलोका कारण सिड्नी वरपरका क्षेत्रको वायु निकै प्रदूषित भएको छ । अधिकारीका अनुसार सिड्नी वरपरका क्षेत्रहरू बाक्लो धुवाँले छोपिएका छन् भने वायुको स्तर जोमिखयुक्त रहेको छ
काठमाडौं, मंसिर २ गते। थाइल्याण्डकी पोर्नतिप बुरानाप्रसेर्तुक महिलातर्फ र भियतनामका काव सुओङ्ग फाम पुरुषतर्फ योनेक्स सनराइज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय च्यालेञ्ज २०१९ को उपाधि जित्न सफल भएका छन्। २५ हजार डलर पुरस्कार राशि रहेको
पूर्वी चीनमा आगलागी, ५ जनाको मृत्यु, ३ घाइते
हेफेइ&ndash; पूर्वी चीनको आन्हुइ प्रान्तमा अवस्थित एक भवनमा शुक्रबार बिहान भएको आगलागीमा परी पाँच व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य तीन घाइते भएका छन् ।&nbsp; स्थानीय समयाअनुसार शुक्रबार बिहान ५ः५७ बजे यस आवासीय भवनको पहिलो तल्लाका
प्रकाशित मितिः कार्तिक 29, 2076
मोदी र पुटिनद्धारा भारत-रुस सम्बन्धको समिक्षा
एजेन्सी- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच बुधबार ब्राजिलमा भेटवार्ता भएको छ ।&nbsp; उनीहरुका बीचमा भारत र रुसको आपसी सम्वन्धका बारेमा समिक्षा गर्दै दुई देशको मित्रतालाई अझ मजबुद गराउने ब